कालापानी बारे फेरी बोले प्रधानमन्त्री ओली ……. – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
कालापानी बारे फेरी बोले प्रधानमन्त्री ओली …….
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूमिबाट छिमेकीहरूलाई आफ्ना सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन्।
यो सरकारले एक इन्च नेपाली भूमि पनि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि आफूलाई नचाहिने भन्दै उनले नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फेर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
आइतवार सत्तारूढ नेकपाको भातृसङ्गठन युवा सङ्घको राष्ट्रिय एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले विश्व शान्तिका लागि नेपाली सेना पठाइने गरेको स्मरण गर्दै नेपाल शान्तिको पक्षमा रहेको र छिमेकीसँग तनाव नहोस् भन्ने चाहेको बताए।
भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा भारतीय सिमानाभित्र देखाएपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको छ।
“हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाऊन्। हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस फिर्ता लानुहोस्, हाम्रो आग्रह छ,’ उनले भारतको नामोच्चारण नगरी भने।
गत हप्ता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कालापानीको विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ‍नेताहरूले कालापानी नेपाली भूभाग भएको भन्दै कूटनीतिक उपायद्वारा विवाद टुङ्ग्याउन सल्लाह दिएका थिए।
“कतिपय मान्छेहरूले नक्सा सच्चाउनुपर्‍यो भनेका छन्,” ओलीले भने, “नक्सा सच्चाउन त अहिले नै सकिन्छ, यहीँ। नक्साको कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो।”
“यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ। नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ। नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो। नेपाल नेपाली भूमि फिर्ता लिने सक्षम छ र सक्नुपर्छ। यसमा हामी एकजुट भएर आवाज उठाएका छौँ र यो एकता आवश्यक छ।”
“म दल, सङ्घ संस्था सबैलाई सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु।”
कालापानीबारे नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै यी अभिव्यक्ति दिएका हुन् । sorce https://kailashpost.com/2019/11/17/
Previous ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए आयोजना उद्घाटन हुँदै
Next नक्कली हस्ताक्षर प्रकरण : लाखौं चोरीमा बैंक कर्मचारीकै संलग्नता !
3 thoughts on “कालापानी बारे फेरी बोले प्रधानमन्त्री ओली …….”
Katrina Torrance says:
Yasmin Khull says:
Pamala Hulsey says: